China palletizing robot HY1010A-143 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
Palletizing ဆိုသည်မှာထိုကဲ့သို့သော pallet ပေါ်တွင်မြှောင်းပုံပုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံတစ်ခုတွင်အလားတူပစ္စည်းတစ်ခုကဲ့သို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတင်ဆောင်ခြင်း၏စစ်ဆင်ရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ Depalletizing ပြောင်းပြန်ပုံစံအတွက် loaded အရာဝတ္ထုချ၏စစ်ဆင်ရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။
Palletizing နှင့် Depalletizing အတွက်အပူဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုအနေဖြင့် HY1010A-143 ကိုအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သေးငယ်သောပုံးများ၊ ဆန်အိတ်ငယ်များစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံသည် HY 1010A-143 ကိုထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဝင်ရိုးတန်း Max Payload Repeatibility စွမ်းရည် ပတ်ဝန်းကျင် အလေးချိန် တပ်ဆင်ခြင်း အိုင်ပီအဆင့်
6 10KG ± 0.083kva 0-45 ℃စိုထိုင်းဆမရှိပါ 170 ကီလိုဂရမ် မြေပြင် / မျက်နှာကျက် IP65
အမြန်နှုန်း J1 J2 J3 J4 J5 J6
Q1. ဘယ်အချိန်မှာစက်ရုပ် palletizing ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောလဲ?
A. ဥပမာတရုတ်ကိုယူပါ။ အခုဆိုရင် ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့လစာကအရမ်းမြင့်တယ်။ အထူးသဖြင့်လုပ်သားအင်အား။ အကယ်၍ သင်သည် YOO HEART စက်ရုပ်နှင့်စက်ရုပ်ကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းသောပညာရှင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါကလူကုန်ကျမှု 3-4 ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
A. ကျောက်တုံးများနှင့်ငွေထည့်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများသည် Robot ကိုသုံးနိုင်သည်။
Q3.Palletizing စက်ရုပ်၏အကြီးမားဆုံးသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်အဘယ်နည်း
A. ယခုအချိန်တွင် ၁၆၅ ကီလိုဂရမ်သည်အများဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ မှစတင်၍ ကျောက်ပြားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိလိမ့်မည်။
Q4. စက်ရုပ် palletizer သည်တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ထုတ်နိုင်သည်
A. နှစ်ခုမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူ, 1, စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူညှပ်အလေးချိန်နှင့်အတူစက်ရုပ် rated payload ထက်လျော့နည်းသင့်ပါတယ်။ 2, ညှပ်ပိုမိုထုတ်ကုန်ဖမ်းဆုပ်ရန်လုံလောက်သောပိုကြီးသည်။
ကောင်းပြီ YOO HEART စက်ရုပ်သည်ပထမဆုံးသောတရုတ်စက်မှုစက်ရုပ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ စက်ရုပ်ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ယူနစ် ၁၅၀၀၀ နီးပါးရောင်းချခဲ့သည်။ အခြားသူများအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော CRP, JZJ, JHY, QJAR အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် RV reducer ကိုအသုံးပြုသည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စက်ရုပ်ဈေးနှုန်းကိုကျဆင်းစေပြီးသုံးစွဲသူအားလုံးသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းသောစက်ရုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ palletizing စက်ရုပ် HY1165A-290
နောက်တစ်ခု: ပန်းချီစက်ရုပ် HY1050A-200